Ezekieri 26 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Uprofita pamusoro peTire (1-21)
“Nzvimbo yekunanikira mambure ekukukudzisa” (5, 14)
Matombo nevhu zvichakandwa mumvura (12)
26 Mugore rechi11, pazuva rekutanga remwedzi, shoko raJehovha rakauya kwandiri, richiti: 2 “Mwanakomana wemunhu, Tire zvayakati kuJerusarema,+ ‘Tsvatu waro! Gedhi riya remarudzi raputswa!+ Zvinhu zvese zvichauya kwandiri uye ndava kuzopfuma nekuti iro raparara’; 3 zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndiri kukurwisa iwe Tire, uye ndichaunza marudzi mazhinji kuti akurwise, segungwa riri kuunza mafungu aro. 4 Vachaparadza masvingo eTire voputsa shongwe dzayo,+ uye ndichatsvaira ivhu rayo ndoisiya iri ruware runopenya. 5 Ichava nzvimbo iri pakati pegungwa yekunanikira mambure ekukukudzisa.’+ “‘Nekuti ini pachangu ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha, ‘uye ichapambwa nemarudzi. 6 Vanhu vayo vekumaruwa vachaparadzwa nebakatwa, uye vanhu vachaziva kuti ndini Jehovha.’ 7 “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Ndiri kuunza Mambo Nebhukadhinezari* weBhabhironi kubva kuchamhembe kuti arwise Tire;+ iye ndimambo wemadzimambo,+ uye ane mabhiza+ nengoro dzehondo,+ nevarwi vanotasva mabhiza, neuto rine varwi vakawanda. 8 Achaparadza vanhu vako vekumaruwa nebakatwa, achavaka rusvingo rwekukukomba, achaunganidza murwi wekukukomba uye achamisa nhoo huru dzekukurwisa. 9 Achadhiritsa masvingo ako nechekugumurisa masvingo, uye achaputsa shongwe dzako nematemo* ake. 10 Mabhiza ake achange akawanda zvekuti uchazara neguruva rawo, uye mambo wacho paachapinda pamagedhi ako sevarume vari kupinda muguta rine masvingo akaputsika, ruzha rwevatasvi vake vemabhiza, nerwemavhiri engoro dzake ruchazunungusa masvingo ako. 11 Mahwanda emabhiza ake achatsika-tsika migwagwa yako yese;+ iye achauraya vanhu vako nebakatwa, uye mbiru dzako dzakasimba dzichawira pasi. 12 Vachatora pfuma yako nechisimba, vopamba zvinhu zvako zvekutengesa,+ voputsa masvingo ako, uye vachaputsa dzimba dzako dzakanaka; vachabva vakanda matombo ako mumvura pamwe chete nematanda ako nevhu rako.’ 13 “‘Ndichaita kuti ruzha rwekuimba kwako rugume, uye kurira kweudimbwa hwako hakuzonzwikizve.+ 14 Ndichakusiya wava ruware runopenya uye uchava nzvimbo yekunanikira mambure ekukukudzisa.+ Hauzombovakwizve, nekuti ini Jehovha ndazvitaura,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha. 15 “Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuTire: ‘Zvitsuwa hazvizodederi here pachanzwika ruzha rwekuparara kwako, pachagomera vanhu vanenge vava kufa, uye pachafa vanhu vako vazhinji?+ 16 Machinda ese emugungwa achaburuka pazvigaro zvawo zveumambo, uye achabvisa nguo dzawo refu* nenguo dzawo dzakamendwa uye achadedera. Achagara pasi achingodedera, oramba akakuti nde-e achishamisika.+ 17 Uye vachakuimbira rwiyo rwekukuchema,+ voti kwauri: “Chokwadi waparara,+ iwe waimbogarwa nevanhu vekumakungwa, iwe guta rairumbidzwa;Iwe nevanhu vako maiva nesimba mugungwa,+Muchityisa vagari vese vepanyika! 18 Zvitsuwa zvichadedera pazuva rauchaparara,Zvitsuwa zviri mugungwa zvichanetseka pauchange usisipo.”’+ 19 “Nekuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: ‘Pandichakuparadza wosara waita semaguta asina anogaramo, pandichakukunda nemvura ine mafungu, wonyudzwa nemvura ine simba,+ 20 iwe nevaya vauri kuenda navo mugomba* ndichakuendesai kuvanhu vekare kare. Ndichaita kuti iwe nevaya vari kuenda mugomba mugare munzvimbo yakadzikira kwazvo kungofanana nenzvimbo dzekare dzakaparadzwa+ kuti pasava neanogara mauri. Ndichabva ndakwidziridza nyika yevapenyu. 21 “‘Ndichaita kuti ungoerekana wabatwa nekutya kukuru uye uchashayikwa.+ Vachakutsvaga asi hauzombowaniki,’ ndizvo zvinotaurwa naChangamire Ishe Jehovha.”
^ Kana kuti “nemapakatwa.”
^ Kana kuti “nguo isina maoko.”
^ Kana kuti “muguva.”